Wararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala Iibsiga Iyo Wargeysyada Maanta Oo Talaado Ah 10 May
HomeWararka CiyaarahaWararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala Iibsiga Iyo Wargeysyada Maanta oo Talaado Ah 10 May
May 10, 2022 Wararka Ciyaaraha, Suuqa kala iibsiga, Wararka Wargeysyada, Warka Xiisaha Leh 0
Bayern Munich ayaa qorsheyneysa inay xagaaga u dhaqaaqdo weeraryahanka Liverpool iyo Senegal Sadio Mane iyadoo kooxda Jarmalka ay horey xiriir ula sameysay wakiilka ciyaaryahanka. (Metro)
Si kastaba ha ahaatee, Liverpool ayaan wax xiriir ah ka helin kooxda Jarmalka. 30-sano jirkaan ayaa qandaraaskiisu dhacayaa 2023. (Mirror)
Arsenal ayaa diyaar u ah inay sahamiso u dhaqaaqista weeraryahanka reer England ee Raheem Sterling hadii Manchester City ay ogolaato inay iska iibiso 27 jirkaan xagaagan, markaasoo qandaraaskiisa uu hal sano uga harsan yahay. (Telegraph)
Gunners ayaa wadahadalo la furtay 29 jirka qadka dhexe ee Masar Mohamed Elneny, kaasoo qandaraaskiisa haatan uu dhacayo xagaaga. (The athletic)
Ciyaaryahanka Liverpool Alex Oxlade-Chamberlain, oo 28 jir ah, ayaa u baqaya mustaqbalkiisa Anfield, maadaama aan lala soo xiriirin heshiis cusub, mana uusan u ciyaarin kooxda tan iyo 20kii March. Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Ingariiska ayaa qandaraas kula jira ilaa xagaaga soo socda. (DailyMail)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee France Paul Pogba, oo qandaraaskiisa Manchester United uu dhacayo xagaaga, ayaa u sheegay Manchester City inuusan dooneynin inuu ku biiro iyaga, 29 jirkaan ayaa la rumeysan yahay inuu doorbidayo dalab uga yimid koox kale. (Mirror)
West Ham ayaa ah kooxda ugu cadcad saxiixa weeraryahanka Arsenal Eddie Nketiah, oo 22 jir ah. Gunners ayaa isha ku heysa inay ku sii hayso kooxda reer England. (DailyMail)
Tababaraha Chelsea Thomas Tuchel ayaa la filayaa in loo sheego inuu taageero ka heli doono milkiilayaasha kooxda ee imaanaya. (Telegraph)
Tababaraha Newcastle United Eddie Howe ayaa dhageysan doona dalabyada ilaa 10 ciyaartoy xagaaga oo uu ku jiro kabtan Jamaal Lascelles, iyadoo daafaca Ingariiska, 28, uu hoos u dhacayo heerka sare ee kooxda. (Sun)
Aston Villa ayaa dalabkii ugu horeysay ka gudbisay 12 milyan ginni si ay heshiis joogto ah ula wareegto ciyaaryahanka khadka dhexe ee Barcelona Philippe Coutinho. 29 jirka reer Brazil ayaa amaah ku joogay kooxda Premier League tan iyo bishii January. (DailyMail)
Daafaca Chelsea Jake Clarke-Salter, oo 24 jir ah, ayaa waxaa doonaya Leeds United iyo PSV Eindhoven ka dib markii uu qaab amaah ah ugu soo ciyaaray kooxda heerka labaad ee Coventry City . Xidigii hore ee xulka qaranka England (Sun)
Tababaraha Barcelona Xavi ayaa sheegay in mawqifkooda dhaqaale ay u diideen inay u dhaqaaqaan 21 jirka weerarka uga ciyaara Norway Erling Haaland, kaasoo qarka u saaran inuu Manchester City kaga soo biiro Borussia Dortmund . (ESPN)
Manchester United ayaa ka codsatay wakiiladeeda inay helaan suuqa kala iibsiga xorta ah ee ugu fiican xagaagan. (Sun)
Weeraryahanka Red Bull Salzburg iyo Jarmalka Karim Adeyemi, oo 20 jir ah, ayaa ku dhow inuu u dhaqaaqo Borussia Dortmund ka dib markii Manchester United ay ku guuldareysatay inay u dhaqaaqdo, sida uu sheegay wakiilkiisa. (Metro)